ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးဆုနဲ့ တစ်သင်းစာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားများ.... - YTV Channel
Home | Sports | ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးဆုနဲ့ တစ်သင်းစာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားများ….
ပရီးမီးယားလိဂ်တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးဆုနဲ့ တစ်သင်းစာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားများ….
မနေ့ကမှ တရားဝင်ကြေငြာသွားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးကစားသမား ၁၁ ယောက်စာရင်းထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါပြီ...ဂိုးသမားနေရာမှာတော့ လီဗာပူးလ်ဂိုးသမား အလီဆင်ဘက်ကာက ရရှိသွားပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် ဇာတ်ခုံမှာအကောင်းမွန်ဆုံး ဂိုးဖမ်းစွမ်းရည်တွေနဲ့ ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်....တစ်နှစ်တာပတ်လုံး Passing skill တွေမှာ အဆိုပါဂိုးသမားက ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီး Clean sheet ပွဲအရေအတွက်က မန်စီးတီးဂိုးသမားနဲ့ တူညီစွာရှိနေပေမဲ့ ကစားပွဲအတွင်း ပါဝင်ကစားထားတဲ့ပွဲစဉ်မှာ မန်းစီးတီးဂိုးသမားက တစ်ပွဲသာပိုပြီး ရှုံးနိမ့်ထားတာကြောင့် အလီဆင်ဘက်ကာက ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ဂိုးသမား ဆန်ကာတင်နေရာကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်..
နောက်တန်းလေးယောက်နေရာမှာတော့ လီးဗာပူးလ်က ဗန်ဒိုက် နှင့် အာနိုးတို့နှင့် ရီးရဲလ်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ ချယ်ဆီးမှရူဒီဂါ အပါအဝင် မန်စီးတီးအသင်းမှ ကန်ဆယ်လိုတို့က နောက်တန်းအကောင်းမွန်ဆုံး ကစားသမားလေးယောက်အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်.... အလယ်တန်းနေရာမှာတော့ မန်စီးတီးမှ ဒီဘရိုင်း၊ ဗာနန်ဒို ဆေးလ်ဗားတို့နှင့် တွဲဖက်ပြီး လီဗာပူးလ်အသင်းမှ သီယာဂို တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်...
ရှေ့တန်းတိုက်စစ်ရဲ့တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားများကတော့ လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့ ဆာလက်စ်နှင့် မာနေးတို့နှင့်တွဲဖက်ပြီး မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ Legend ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို တို့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်...
တစ်သင်းစာ အကောင်းဆုံးကစားသမားများ ကို ကြေငြာပြီး မကြာခင်မှာပဲ တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုတော့ လီဗာပူးလ် မှ မိုဟာမက်ဆာလက်စ် ကရရှိသွားခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် လူငယ် အကောင်းဆုံးသမားဆုကိုတော့ ဖေးလ် ဖိုဒန်က ဆွတ်ခူးရယူသွားခဲ့ကြောင်း ကနဦးသတင်းများအရ သိရှိရပါတယ်... ကဲ အာကစားပရိသတ်ကြီးရေ ပရီးမီးယားလိဂ် ရွေးချယ်ထားတဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေက အကောင်းဆုံးလို့ထင်မိပါသလား...
ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရော အကောင်းဆုံးတစ်သင်းစာ လူစာရင်းမှာ ဘယ်သူတွေကို ထည့်သွင်းချင်လဲဆိုတာလေး ကွန့်မန့်လေးမှာ ဖြေပေးခဲ့ပါဦးနော်...